Ngakho ufuna ukwenza abangane bakho besilisa ezimnandi ngosuku lwakhe lokuzalwa! Ngomqondo onabile, akunzima ngakho uma ucabanga kancane, "pokoldovat" beveza simo kwelanga amadoda lokuzalwa. Kulapho-ke intandokazi yakho, khumbula lokhu lokuzalwa isikhathi eside. Futhi believe me, ngisho noma akamtshelanga ukuba uhlale inhlansi efudumele ngokupheleleyo khona emphefumulweni wakhe, okuyinto kungenzeka, ngokushesha luyoqala elangabini real - umlilo uthando.
Lungiselela kulolusuku abalulekile kufanele kuqale yokuthi ukuthola esengumntwana nangesikhathi izithombe osanda kweva eshumini nambili. Le nqubo kungaba izihlobo axhunyiwe. Ziyasibona umfana lokuzalwa wathatha lezi zithombe kusuka zomlando umndeni wakhe, badinga ukuskena noma ukuthatha ifothokhophi - njengoba uzobe elula kakhudlwana. Kodwa olunezithombe okuskeniwe umsebenzi ezithakazelisayo.
Ngakho into yokuqala, okuyinto ingxenye simo kosuku amadoda lokuzalwa, kuyinto "Ikhiphe samaholide odongeni iphephandaba". Ufaka ephepheni ezithombeni ezindala, udinga ukuza kubo amasignisha yasekuqaleni. Nokho, uma evesini. Iphephandaba kungenziwa ngokuthi yokudala futhi kumnandi, isibonelo, "kanjani Steel Ingabe Omnene" noma "Hero idolobha lethu", "le nsizwa yokuqala edolobhaneni" noma "Sex - uphawu 199 ..."
Esinye isici esibalulekile okufanele ungakhohlwa, okwenza simo we yini nosuku lokuba umuntu lokuzalwa - a siyakuhalalisela elikhanyayo ezihlekisayo. Futhi kufanele wenze kusengaphambili futhi unike izivakashi ukuze baye bafunda futhi wawathetha. Siyakuhalalisela kungaba kokubili vesi kanye ingoma. ematfuba Omkhulu okulungisa Russian Folk songs futhi ditties. Ngokwesibonelo:
Nangu umuntu nge gorochki phansi!
Mhlawumbe Pasha yethu siyeza!
On kuye isudi, ihembe, uthayi
Girls bayobaletha bonke crazy!
Sihalalisela kuye Happy Birthday!
Futhi sifisa kuye
Ibhokisana lokugcina itiye noma ikhofi lonke ujamu
Futhi isikhwama esigcwele imali!
Yiqiniso, kungenzeka ukuba wenze le ngoma isipho abafanele - elikhulu sesikhwama sokuthenga noma isikhwama, a vase egcwele ujamu noma esikhwameni Chic. Ngokujwayelekile, konke kuncike kulokho kuyoba isipho kusukela kubanikeli.
Kungaba e iskripthi kosuku lokuzalwa ukwenza amadoda nostalgic for izinsuku endala asebashona. Khona-ke lapha ephelele bamba Gymnastic mbhoshongo kuyindida.
Kubahlanganyeli mini - ekhonsathini kufanele sigqoke ngendlela efanele ngesikhathi: ku leotards Friend, noma okuphambene nalokho, ukukhetha nabo amadolo welulela, kwaba amadoda "imfashini" ekhaya Eighties ezikude.
Pyramids ngokwabo Ungahambisa ngokushelela ku kuyindida "izithombe ophilayo", "umngcele unogada onogada," lapho izinja eyadlalwa isivakashi kwezobuciko kakhulu; "Ukugijima phezu amagagasi", lapho amadoda amaningana zibonisa amagagasi nokuqamba amanga writhing phansi, futhi lona wesifazane "egijima" kuwo.
Futhi iskripthi kosuku ukuzalwa indoda kungase kuhlanganise lottery win win. Kuphela kanye kuwufanele bawunakekele kusengaphambili, ukulungiselela amathikithi pretty funny futhi original, izipho ezishibhile - kwi. Njengoba ambikele amakhondomu ongakhonza (uma phakathi kwabantwana bakwa-izivakashi), pacifiers, ushokoledi ngesimo amabhodlela ugologo rum, amapensela nezibaya, notebook, ibheji. Umklomelo main kungenzeka briefs zabesilisa lebhalwe okudala ukuthi uthi into efana "ningathinti" noma "Asihambe uyabhema!".
Ungakhohlwa ukufaka kule ndaba yokuzalwa kumnandi imincintiswano wesilisa! Lokhu kungase kube imidlalo zezingane evamile, lapho sonke ukudlala njengoba ingane. Futhi ungakwazi jabulisa izivakashi futhi "omdala" imincintiswano, ezifana dancing ne ephepheni. Ishidi sifakwe phakathi owesilisa nowesifazane, zibangelwa ukuncintisana. Kufanele kube amabhangqa amaningana enjalo. Uma umculo iqala, abadansi kufanele ukwazi akuqede amaqabunga awo, kodwa ingawuthinti ngezandla zakhe. Kakhulu hilarious ukuze eceleni abukele njengoba umbhangqwana ngenkuthalo ihaba wriggle ngaphansi ihubo kancane bushelelezi, ukuzama ukuyishaya ngezifo kabi ohlwini lwakho!
Nakuba ngamunye ngokuqinisekile imibono yakhe yokuqala mayelana imincintiswano kanye mini-ekhonsathini amakamelo. Kuyadingeka ukuba sizame ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu kwaba iholide kumnandi.
Indlela ama-Easter kwesokudla? Yiziphi Easter amasiko e-Ukraine nakwamanye amazwe?
Toast usuku lokuzalwa - ekuqaleni fun!
Mostsvettorg: lezi zimbali futhi sezimbali ezibhekwa lizinga ubuhle kanye nekhwalithi
Popular amakilabhu Chelyabinsk
Izinyawo Izizathu merznuschih. Ungashiyi ngaphandle ukunakekela le nkinga
IS-7 - umhlahlandlela World of Tanks
Obsolete uma inkinga soyise nezingane namuhla? Buka kusukela iphuzu ngokwengqondo buka,
Amagama bazalwane abangcwele, owadala zamagama Slavic. Umlando zamagama Slavic